Saturday September 29, 2018 - 11:41:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Indonesia ee dhaca qaaradda Asia ayaa sheegaya in boqolaal qof ay ku dhinteen dhul gariir hor leh oo ku dhuftay mid kamida jaziiradaha ugu waaweyn wadankaasi.
Wasaaradda arrimaha gudaha Indonesia ayaa sheegtay in ugu yaraan 384 ay dhinteen kumanaan kalane ay dhaawacmeen kadib markii dhul gariir baaxad leh uu saaka aroortii ku dhuftay Jaziiradda Sulawesi.
Mas'uul u hadlay hay'adda Musiibooyinka dabiiciga Indonesia wuxuu sheegay in boqolaal guri ay ku burbureen dhulka gariirka islamarkaana lala'yahay tobanaan qof oo loo malaynayo in ay ku hoos xanibanyihiin burburka hoostiisa.
Mowjadaha badda ayaa sare ukacay kadib markii uu dhul gariirku ku dhuftay Jaziiradda Sulawesi, dhul gariirkan oo cabirkisu yahay 7.5 oo ah alladda lagu cabiro dhul gariirada ayaa saameyn ba'an ku reebtay kumanaan qoys.
diyaaradaha qumaatiga ukaca oo ay isticmaalaan ciidamada Melleteriga ayaa loo diray jaziiradda dhul gariirku ku dhuftay si ay dhaawacyada usoo daabulaan waxaana xirmay garoonka diyaaradaha caalamiga jaziiradda Sulawesi kadib markii uu dhul gariirku burburiyay halka ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka.
Maamulayaasha wadanka Indonesia waxay soo saareen digniin cusub oo ay muwaadiniinta ugu sheegayaan in ay dhici karaan dhul gariirro u eg Tusunaami oo kale, dhowr bil ka hor dhul gariir halaag sababay ayaa ku dhuftay isla wadanka Indonesia oo ah wadanka ugu jaziiradaha badan caalamka uguna musiibooyinka badan.